Ifektri Yesixwayiso Factory - China Isexwayiso Tape Series Abenzi, abahlinzeki
I-anti-slip tape yenziwe ngezinhlayiya ze-silicon ezinzima futhi eziqinile. Izinhlayiya ezinjalo zifakwa kumafilimu epulasitiki anamandla amakhulu, axhumanayo, angamelana nesimo sezulu, futhi ingenye yezinto ezinzima kunazo zonke ezaziwayo kuze kube manje.
Ithebhu yokuqapha engeyona ingcina
Ngokuvamile kusetshenziselwa ukwahlukaniswa kwezindawo zokwakha, izindawo eziyingozi, izingozi zomgwaqo nezimo eziphuthumayo. Futhi uthango lokugcinwa kwamandla kagesi, ukuphathwa komgwaqo, ubunjiniyela bokuvikelwa kwemvelo.
Ithebhu ye-PVC Barrier
I-Barrier Warning tape inezinzuzo zokungenwa ngamanzi, ukufakazela umswakama, anti-corrosion, anti-static, njll. Ilungele ukuvikelwa kokugqwala kwamapayipi angaphansi komhlaba njengamapayipi omoya, amapayipi amanzi, amapayipi kawoyela njalonjalo. Iteyipu enemibala emibili ingasetshenziselwa izimpawu zokuxwayisa phansi, amakholomu, izakhiwo, ithrafikhi nezinye izindawo.
I-PE yokuqapha iteyipu
Usebenzisa izinto ezinhle kakhulu ze-PE, umbala ogqamile. Isetshenziselwa kabanzi ukuqwashisa esizeni nokuhlukaniswa kwezimo eziphuthumayo noma izindawo zokwakha nezindawo eziyingozi.
Ithebhu yesixwayiso se-PVC yesithiyo
I-Barrier Warning tape ibizwa nangokuthi i-tape identification, i-tape yangaphansi, i-tape yaphansi, i-tape eyingqophamlando, njll. Iteyipu eyenziwe ngefilimu ye-PVC futhi embozwe ngcina enamathela ngocindezelo lwenjoloba.